Vomanga - Wikipedia
Ny vomanga na bageda (Ipomoea batatas) dia zavamaniry mandady. Avy any amin’ ny faritra manana toetanim-pehin-tany any Amerika ny vomanga. Eny amin’ ny tany fasehina no ambolena azy any amin’ ny faritra mafana eto amin’ izao tontolo izao.
Ny mba hahazoana fakany mibontsina (izay atao hoe vodiny) no antony ambolena azy indrindra. Azo hanina koa ny raviny. Misy roa karazana ny vomanga famboly, dia ilay karazana mafimafy somary maina sy ilay karazana malemy somary mandranoka miloko mavo. Misy karazana vomanga iray tsy fihinana fa ambolena ampadadina hatao haingon-trano na haingon-tanàna (Ipomoea pandurata).
Ny vomanga dia manana tavolo betsaka, izay ampiasaina hanenjanana ny lamba sy ny taratasy, ary ampiasaina amin’ ny fanamboarana dity sy amin’ ny orinasa mpanadio lamba. Ilay karazany miloko mavokely sy mavo dia betsaka karôtenina. Any Etazonia sy any Azia dia atao sakafom-biby ny vomanga notsiratsirahina sy nohamainina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vomanga&oldid=998759"
Dernière modification le 8 Desambra 2020, à 10:36
Voaova farany tamin'ny 8 Desambra 2020 amin'ny 10:36 ity pejy ity.